साथी यहाहरुलाई हसाउनको लागि भनि केहि नया तथा पुराना नेपाली जोक्सहरु लिएर आएका छौ ...आशा अनि पूर्ण बिश्वाश छ ...
यहाहरुलाई यी चुटकिलाहरुले मज्जाले हसाउनेछ...
1. सँगै बसेर मागौँ ।
एकजना माग्ने बाटोमा हिड्दैँ गरेको एउटा विथार्थीसंग : दाई एक रुपैयाँ दिनुहोस् न !
विथार्थी: म सित त एक सुका पनि छैन...!!
माग्ने : आउनुहोश त्यसो भए सँगै बसेर मागौँ ।
२. सालीको कट्टु फुकाल्छु ।
दुइ जना कर्मचारीहरु आपसमा कुरा गर्दै
पहिलो कर्मचारी : आज रातिको प्लान के छ त यार ?
दोश्रो कर्मचारी : आज बिहानको मासु बचेको छ ..चट्ट लोकलसंग खादै क्रिकेट हेर्ने .. अनि तिम्रो नि ??
पहिलो कर्मचारी : घर जानेबित्तिकै सालीको कट्टु फुकाल्छु ।
दोश्रो कर्मचारी : हाहाहा ... किन ...नि ..?
पहिलो कर्मचारी : बिहान हतार हतारमा सालीकै कट्टु लगाएर पो आएछु....के यार ...हाहाहा ।
३.दुवैलाई यहाँबाट फ्याँके भने
दुईजना नेताहरु हेलिकप्टरमा चढेर बाढिग्रस्त क्षेत्र निरिक्षण गरिरहेका थिए।
पहिलो नेता: यदिँ मैले यहाँबाट ५०० को नोट फ्याँके भने त्यी पिडित जनता कति खुसी होलान हगि?
दोस्रो नेता: मैले पनि यहाँबाट १००० को नोट फ्याँके भने झन् कति खुसी होलान त?
(दुवै नेताको कुरा सुनेर पाइलटलाई साह्रै रिस उठेछ र झोकिदैँ भनेछ)
पाईलट: यदि मैले तपाईहरु दुवैलाई यहाँबाट फ्याँके भने त्यी जनताहरु सबैभन्दा बढि खुसी हुन्छन..!!!
गधा चढ्छु, गधा चढ्छु,
४ . श्रीमान श्रीमतीसंग) : हेरन सानु !! यो छोराले गधा चढ्छु, भनेर हैरान पारिसक्यो भन्या मलाई त !!
जिस्कदै श्रीमती: के भो त नि हजुर !! एकछिन काँधमा बोकिदिनुहोश न त...!!!
स्कुल र गर्ल्स कलेज
५ . रामु : भन त श्याम ..स्कुल र गर्ल्स कलेजमा के फरक छ ?
श्याम : स्कुलको बहिर स्कुल एरिया बिस्तारै हाक्नुस... भनेर लेखिएको हुन्छ तर गर्ल्स कलेजको अगाडि लेखिएको हुदैन..
राम : किन...नि यार ..??
श्याम: किनकी गर्ल्स कलेजको बहिर पुगेपछि सबैले गाडी आफै बिस्तारै हाक्छन ...!!!
६ . काले र गोरे हस्पिटलमा रुदै बसेको देखेर अचम्म मान्दै
च्यान्टे : ओए ...गोरे किन रोको यार त...?
गोरे : Blood Test गर्न भनेर मेरो औला नै काटी दियो यार ..!!
च्यान्टे : अनि काले त किन रुइरको ...
काले : मेरो त Urine Test गर्न पर्छ रे ...उ हु उ हु ...
Orange र Apple
७. काले : ल भन त गोरे Orange र Apple मा के फरक छ ..???
गोरे : थाहा छैन तैले नै भन न ..??
काले : Orange को कलर Orange नै हुन्छ तर Apple को कलर भने Apple हुदैन ..!!!
एकचोटी भनेको कुरा कहिले काट्दिन।
८ . प्रेमी : प्रिय तिमि कति बर्ष कि भयौ ?
लजाउदै ..प्रेमिका : सोर बर्ष..!!
प्रेमी : तर पाँच बर्ष अगाडि पनि तिमीले आफ्नो उमेर यहि नै बताएकी थियौँ।
अलि गम्भीर भए जस्तै गर्दै ..प्रेमिका : म आफुले एकचोटी भनेको कुरा कहिले काट्दिन।
९. तिम्रो फोटो राख र अरु चाहिँ फिर्ता गरिदिनु ल ..!!
विदेशमा भएको लाहुरे प्रेमी लई उसको प्रेमिकाले आफ्नो बिहे भएको र तिमीसंग भएको फोटो फिर्ता गर भनि चिठ्ठी लेखि पठाउछे ..!!
लाउरे पनि के कम उसले आफुसंग भएका केटीहरुको फोटो जम्मा गर्यो र लेख्यो:
प्रिय भूपू मायालु ..
मैले तिंमी कुन चाहिँ हो भनेर चिन्न सकिन.... त्यसैले कृपया तिम्रो फोटो राख र अरु चाहिँ फिर्ता गरिदिनु ल ..!!
त्यसपछि मलाई कसले बचाउँछ...त ..!!
१०. एक फिल्म डाइरेक्टरले नया हिरोइनलाइ उसको सीन सम्झाउँदै भन्छ : तिमीलाई नदिमा झर्नबाट हिरोले बचाउँछ र आफ्नो काँधमा राखेर नदिको नजिकै रहेको आफ्नो घरमा लिएर जान्छ।
हिरोइनले गम्भीर हुदै : ....त्यसपछि मलाई कसले बचाउँछ...त ..!!
टि बाटै स्टार्ट हुन्छ
दुइजना ड्राइभरहरु आपसमा कुरा गर्दै ...
११. पहिलो: तिम्रो गाडीको नाम के हो ?
दोश्रो: अँ... खोइ ..मैले त भुलेँ यार, तर... टि बाटै स्टार्ट हुन्छ ।
पहिलो: हो र यार... मेरो त डिजेल बाट मात्रै ..स्टार्ट हुन्छ...!!
१२. कक्षामा शिक्षकले एक दिन विद्यार्थीहरुलाई एउटा पेज दिएर आफ्नो प्रेमी, प्रेमिकाको नाम लेख्न लगाएछन ..
एउटा छात्र बाहेक सबैले दुई सेकेण्डमा नै नाम लेखेर सरलाई बुझाएछन् ..
दश मिनेटपछि त्यो छात्राले उठेर : सर...! थप कपी...दिनुहोश न ...
के फिगर बिगार्छौ
१३. एउटा कुखुरी एउटा पसलमा गइछ अनि पसले सित तीनवटा अन्डा मागीछ..
पसले छक्क पर्दै..: किन चाहियो तिमीलाई अण्डा ..??
कुखुरी : ...जाबो दस रुप्पिया को अन्डाको लागि के फिगर बिगार्छौ भनेर...भाले जी ले भन्नु भाको छ के ...
. एकदिन काले र गोरेले थुप्रै गधाहरुको आगाडी एउटा बाल्टीमा मा रक्सी र अर्को मा पानि राखेर दिएछन
त्यी गधहरुले रक्सि नखाई पानि मात्रै खाएछन ...
यो देखेर र काले र गोरे ले यो निष्कर्ष निकाले .....गधाहरुले रक्सि खादैनन ...!!!!
15. एक रुपैयाँ लिनको लागि म अफिस खोलौ त ?
भिखारी : साहब, एक रुपैयाँ दिनुस् । साहब : तिमीलाई लाज लाग्दैन ? सडकमा उभिएर भिख माग्नलाई ?
भिखारी : अनी के तेरो जाबो एक रुपैयाँ लिनको लागि म अफिस खोलौ त ?
16. मैले अप्रेशन मात्र तिम्रो गरेको थिए
एक व्यक्तिले फेमीली प्लानिङको अप्रेशन गरायो । एक वर्ष पछि फेरी उसको घरमा छोरा पैदा भयो । ऊ दिक्क भयो र डराएर
डाक्टरकोमा गयो र भन्न लाग्यो: "डाक्टर साहेब, तपाईले मेरो अप्रेशन गर्नु भएको थियो तर पनि यो वच्चा कसरी पैदा भयो डाक्टरले भन्यो: मैले अप्रेशन मात्र तिम्रो गरेको थिए , सारा गाँउलेको होइन्
17. भोली म उसलाई भगाएर लानेछु ।
शिक्षक : राम भन त काल कती प्रकारको हुन्छ ?
राम : ३ प्रकारको सर
शिक्षक : स्याबास , अब तिनै वटाको एउटा एउटा उदाहरण देउ त
राम : सर , मैले हिजो तपाईंको छोरीलाई देखेको थिए , आज म उनिलाई माया गर्छु र भोली म उसलाई भगाएर लानेछु ।
18. पेपरमा अण्डा दिनु हुन्छ
19. म पनि Hot तिमी पनि Hot
एउटा गोरो मान्छे थियो , जब उस्को छोरो जन्म्यो त्यो कालो न कालो । उ आफ्नो स्वास्नीको मा गयो र सोध्यो :
" हैन म पनि गोरो तिमी पनि गोरी छोरो चाँही किन यस्तो कालो ?
स्वास्नी : डार्लिङ, म पनि Hot तिमी पनि Hot , बच्चा जल्यो होला नि ।
20. ३ नै जना बेवकुफहरु रक्सी नखाने परे
स्वास्नी : हिजो तपाईं धेरै पिउनु भएर ढल तिर लड्नु भएको थियो , यसरी पनि पिउनु हुन्छ ?
लोग्ने : के गर्नु सबै गलत संगतको असर हो , ४ जना साथी १ बोटल रक्सी , ३ नै जना बेवकुफहरु रक्सी नखाने परे त्यसैले धेर भयो ।
21. एकदम मिठो थियो त ।
शिक्षक : चोरिको फल एकदम नराम्रो हुन्छ त्यसैले कहिले पनि चोरी नगर्नु
रामले बिचमै उठेर भन्यो तर सर हिजो मैले एउटा स्याउ चोरेर खाएको थिए त्यो त एकदम मिठो थियो त ।
22. एउटा बुढा पनि छ ।
युद्दको समयमा एक सिमावर्ती गाउँमा दुश्मनको एउटा फौज घुस्यो । गाउँको सबै तरुनी केटीहरु उनिहरु सँग बच्न गाउँको बाहिर एउटा सुरक्षित ठाउमा भाग्न थालेछन , एउटा बुढी महिला पनि उनिहरु सँगै भाग्न थाले ।
एउटा केटीले सोधेछन : आमा तपाईं किन भाग्नु भएको ? खतरा त हामी तरुनी केटीहरुलाई पो छ त ..
बुढीले भनेछन : तिमीले देखिनौ त्यो फौजमा एउटा बुढा पनि छ ।
23. बरु नयै पञ्जा किन्नुस्
डाक्टरः भर्खरै अप्रेशन गरेको ठाउँमा फेरि टाँका खोल्नुपर्ने भयो ...
रोगी: किन डाक्टरसाप -
डाक्टर: हातमा लाउने पञ्जा भित्रै छुटेछ ...
रोगी: कति लोभी हुनुपरेको हजुरलाई - लौ, लिनोस् पैंसा । बरु नयै पञ्जा किन्नुस् ।
24. बिल तिरेन भने
एक जना मान्छे पुलिशको मा रिपोर्ट लेखाउन गएछ ।
मान्छे : सर , मलाई दिन दिनै फोनमा धमकी आईरहेको छ ।
पुलिश : को हो त्यो जसले सधैं धमकी दिई रहन्छ ?
मान्छे : टेलिफोन अफिस बाट बिल तिरेन भने लाइन काटिदिन्छु भनेर ..
25. मुटुले चाडैनै रानीनामा
एउटा नेता बिरामी भएछ । डाक्टरले उसको परिक्ष्ण गरेछ र नेताले रिपोर्ट माग्न जादा डाक्टरलाई भनेछ : डाक्टर साहब मलाई मैले बुझ्ने भाषामा भन्नुस् कि मलाई के भएको हो ?? यो सुनेर डाक्टरले भनेछ : चामलको कुटनीतिको कारण मल पेटमा नै जम्मा भयो , जसले धेरै समस्याको चेतावनी दिईरहेको छ , फोक्सोले झुठो आश्वासन दिईरहेको छ र मुटुले चाडैनै रानीनामा दिनु आटेको छ ।
26. जब तिम्रो बिहे हुन्छ ।
गर्लफ्रेन्ड र boyfriend एक सुनसान ठाउमा बसीरहेका थिए ।Boyfriend ले Girlfriend लाई touch गर्न खोज्यो ।
Girlfriend: don't touch me. touch गर्ने भए बिहे पछि मात्रै .
Boyfriend: ओके त्यसो भए मलाई कल गर जब तिम्रो बिहे हुन्छ ।
27. श्रीमानको भने पटक्कै विश्वास छैन
एकजन अधबैसे आईमाई आफ्नो श्रीमानलाई लिएर डाक्टर कहाँ जचाउन गएछ ।
डाक्टरले उनिलाई जचाउन भित्री कोठामा बोलाएपछि
महिला: डाक्टर साहेब , बाहिर बसेकी नर्स लाई पनि भित्र बोलाउनुस् न ।
डाक्टर : किन र , तपाईंलाई म माथि विश्वास लागेन हो ?
महिला : त्यसो होइन , तपाईं माथि मेरो पुरा विश्वाश छ तर बहिर बसेको मेरो श्रीमानको भने पटक्कै विश्वास छैन क्या ।
28. प्रश्न पनि त एउटै थियो
शिक्षक: तिम्रो त राजुको उत्तर त एउटै जस्तो छ नि किन ?
राजु: किनकी प्रश्न पनि त एउटै थियो नि त ...........
Jokes are collected from various sources by
Ranju and Subash Dhungel
29. डक्टरको राईटिङ पढ्ने कोसिस गर्छु
औषधि पसले : म फेरि एक चोटि डक्टरको राईटिङ पढ्ने कोसिस गर्छु अनि अर्को औषधि दिन्छु ।
30. बिहान ८ बजे सम्म सुतिरहेको हुन्छु
पुलिश :( डाँकालाई ) भोली बिहान ५ बजे तिमीलाई फासी दिईनेछ ।
डाँका : हा हा हा
पुलिश : ओए किन हाँस्दै छस ?
डाँका : किन भने म त बिहान ८ बजे सम्म सुतिरहेको हुन्छु ।
31. नक्कलको आरोप लाग्ने भयो
बिक्रम: आजको परिक्षा कस्तो भयो ।
राम: एकदम नराम्रो मैले त सबै कपि खालिनै बुझाएँ ।
बिक्रम: मैलेपनि यस्तै गरेँ ।
राम: हे भगवान तिमिले यो के गरेको अब हामिलाई एक अर्काको नक्कलको आरोप लाग्ने भयो ।
32. प्रश्न पत्र कहाँ छाप्दै हुनु हुन्छ
शिक्षक : तिमीहरुको परिक्षा नजिक आईसक्यो , अब कसैको मनमा कुनै प्रश्न छ भने सोधे हुन्छ ।
bitharthi : उठ्यो र भन्यो , सर तपाईंहरु प्रश्न पत्र कहाँ छाप्दै हुनु हुन्छ ?
33. रेकर्ड नि तोड्यौ होइन मुर्दार हरु
माथिको लेख Facebook मा आफ्नो साथीहरु माझ बाड्न चाहनुहुन्छ भने Like अथवा Recommend मा क्लिक गरिदिनुहोला
संसार भरि रहनु भएको नेपाली साथीहरु माझ पुग्न हामीलाई हजुरको सहयोगको आवश्यकता छ !
एकदिन काले त गोरे खुसि हुदै घरमा आएर दिदीलाई भनेछन ..
काले र गोरे : दिदि हामीले त आज राम्रो खेलेर स्कुलको पुरानो रेकर्ड नै तोडिदिएम नि ..
रिसाउदै दिदि : तिमीहरुको काम अरु के भो र ?? घर को समान जति तोडेर नभएर आब स्कुलको रेकर्ड नि तोड्यौ होइन मुर्दार हरु ...!!!
34. मुसा मार्ने दबाई खुवैदिये
कुनै एउटा गाउँमा एउटा मरेको मान्छेलाई देखाउदै पुलिसले पन्जाबिलाई सोध्यो
पुलिश : यो मान्छे कसरि मर्यो ??
पन्जाबी : हजुर साबजी यो मानिसले मेरो पेटमा मुसा दौदिरहेछ भनेथ्यो अनि मैले उसलाई मुसा मार्ने दबाई खुवैदिये ....!!##!!
35. दालमा नुन बराबर
कहिले भान्छामा नछिरेको छोरीलाई आमाले दाल पकौडा दालमा नुन बराबर राख्नु भनेर गयिछन र छोरीले नि एक कटौरा दालमा एक कटौरा नुन बराबर बनायेर पकाइ दिछिन ....कल्पना गर्नुहोश त्यो दाल कस्तो भयो होला...!!!
Labels: Funny Nepali Jokes, Nepali SMS
*** प्रेम दिवस विशेष गजलहरु ***
*** तिमीलाई प्रेमपत्र ***
प्रेम दिवस ( Valentine Day Gajal in Nepali by Jane Tamu )